MAIMAIM-POANA FANAMPIANA NY MPISOLOVAVA
NY MAIMAIM-POANA FANAMPIANA AMIN’NY MPAHAY LALÀNA
Ary raha tsy misy ny mpahay lalàna indraindray no
Na dia manorata fanambarana tsotra any amin’ny unshod lehilahy — tsy asa mora.
Saingy tsy ny rehetra no ho afaka manam-bola ny mpahay lalàna
Kanefa afaka miezaka mba hahazo fanampiana ho maimaim-poana.
Ny sasany lalàna birao manome toro-hevitra ihany ny olona manana fahasembanana, hafa ny toro-hevitra ho an ny mahantra, ary ny hafa kosa dia misokatra ho an’ny rehetra. Miezaha hahatakatra.
Tena hahaliana ny vehivavy
Ny iray amin’ireo safidy mba hahazo maimaim-poana fanampiana ara-dalàna mba hisoratra anarana ao amin’ny tranonkala. Dia manorina mafy, izay, amin’ny fiaraha-miasa amin’ny Minisiteran’ny fitsarana dia manome maimaim-poana ara-dalàna ny asa.
Mba hanampiana tsy afaka rehetra: ny fanompoana no nanome ny olona izay eo ho eo lehibe fidiram-bola ambany euros isam-bolana. Na izany aza, io vola io no tena mafy, satria na amin’ny fomba ofisialy karama eo ho eo any Estonia dia latsaka be.
Ny hiantso izany fomba tena maimaim-poana dia tsy ara-drariny. Ny tsy fanampiana dia toy izao manaraka izao: ny olona mameno ny fanontaniana momba ny tranonkala sy ny mandoa dimy euros.
Izany fomba mahatonga izany mpanjifa
Rehefa afaka izany, roa voalohany ora fakan-kevitra dia omena maimaim-poana. Raha toa ny raharaha lehibe ary ora roa no tsy ampy, nandritry ny adiny telo manaraka, ny mpanjifa mandoa euros, ny governemanta compensates. Nandritra ny folo ora raha tsy misy fihenam-bidy — ny mpanjifa mandoa euros isaky ny ora
FREE MIARAMILA MPISOLOVAVA ONLINE